Ivan Perisic tantaran'ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa nohavaozina avy amin'ny LifeBogger
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Kroasia Ny tantaran'i Ivan Perisic momba ny tantaram-pianakaviana dia mbola tsy voatanisa momba ny tantaram-piainana
Ny tantaran'i Ivan Perisic momba ny tantaram-pianakaviana dia mbola tsy voatanisa momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny "Football Genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "akoho". Ny tantaranay tantanin'ny tantaran'ny tantaram-pahagagana nataon'i Ivan Perisic sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny zava-mitranga tsy manam-paharoa hatramin 'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny olona rehetra ny fampiroboroboana mampiavaka azy ho mpihazakazaka na mpihoko faharoa. Na izany aza, vitsivitsy monja no mihevitra ny Bio Bio Ivan izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ivan Perisic Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra -Voalohandohan'ny fiainana
Ivan Perisic dia teraka tao amin'ny 2nd ny andron'ny Febroary, 1989 ho an'ny reniny, Tihana Perišić ary rain'ny Ante Perisic Split, Kroasia.
Ivan Perisic dia avy amin'ny fianakaviana iray fambolena. Niaraka tamin'ny ray aman-dreniny, dia nihalehibe i Anita Perisic anabavy tokana. Tamin'izany izy nandritra ny fahazazany, dia niantso azy ny namany Koka izay midika ara-bakiteny "akoho" amin'ny tenin-drazany. Ny "akoho"Nanjary lasa anaram-bosotra ny zava-misy fa i Ivan Ivan dia mbola nahita fanampiana tamin'ny rainy akoho toeram-pambolena fiompy tany ivelan'ny tanànan'i Omis any amin'ny morontsirak'i Kroasia.
Ny hingam-pandehanana dia asa lehibe ho an'ny dadan'i Ante (dadan'i Ivan) sy ny fianakaviany. Na dia antsoina hoe anaram-bosotra izy azaakoho", Tsy niahy velively i Ivan raha nirehareha noho ny raharahan'ny rainy izy.
Ivan Perisic tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Fitiavana sy fahafoizan-tena
Ankoatra ny fanampiana ireo ray aman-dreniny tao amin'ny toeram-piompiana biby fiompy, dia nanangana talenta tao amin'ny baolina kitra ny tanora Ivan. Nampiasa ny fotoan-tsariny izy hilalao baolina kitra ary ny fitiavany ny lalao dia nahita azy nisoratra anarana tamin'ny ekipa eo an-toerana, Hajduk Split izay nanome azy ny sehatra hanehoana ny talentany.
Ny fiezahan'i Ivan handray ny asany dia tena matotra ary ho an'ny ambaratonga manaraka dia niteraka olana ara-bola ho an'ny fianakaviana Perisic. Tsy afaka nanamaivana ny saram-pianarany ny ray aman-dreniny. Nilaina ny vola sorona lehibe Ho an'ny dadany izay tsy maintsy nividy ny toeram-pambolena fiompiana biby fiompy mba hikarakarana ny fitakian'ny zanany lahy.
Ny rain'i Ivan, Ante Perisic dia lehilahy iray izay mino ny fampiasam-bola ho an'ny zanany, na dia midika aza ny fialana ny fananany rehetra. Ante dia nivarotra ny fitaovam-piasany ho an'ny biby fiompy mba hanangonam-bola mba handefa ny zanany lahy amin'ny lalao baolina kitra baolina kitra any Kroasia.
Mba hahafahana mampiakatra ny fianakaviany, i Ante dia tsy maintsy mividy fitaovam-pambolena ara-pambolena izay nahazo azy tamim-pahavoazana (Hazavaina etsy ambany ao amin'ny Fianakaviana Ivan Perisic). Antie Perisic dia tany ho an'ny zanany tamin'ny dingana rehetra.
Ivan Perisic tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Fahafoizan-tena tanteraka ary miakatra ny ho avy
Na dia izany aza, dia ny orinasa fiompiana biby fiompy izay nametraka ny lalan'ny asa nataon'i Ivan tany am-piandohana. Nandany enim-polo taona tao Hajduk i Ivan, nilalao baolina kitra ary nandeha nianatra. Na dia niady tamin'ny kaontiny avy amin'ny fividianana fitaovam-piofanana aza izy, dia nanapa-kevitra ny haka vola hafa indray ny raibe rain'i Ivan. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny vola fampindramam-bola dia nampiasaina tamin'ny fandefasana ny zanany lahy tany Frantsa mba hahazoana fahafahana bebe kokoa amin'ny asany. Tamin'io fotoana io, i Ivan dia nantsoina hiatrika fitsapana nataon'ny Sochaux, klioba frantsay iray natsangan'i Jean-Pierre Peugeot, mpikambana mavitrika ao amin'ny fianakaviana Peugeot.
Ho an'ny tanora Ivan, ny tanjona voalohany mankany Frantsa noho ny fahazoana tombontsoa amin'ny asa aman-draharahany dia ny mitoetra ho mahaleotena ary manangona vola hitantanana ny trosam-pianakaviana.
Tsy isalasalana fa maro be ny vola niditra tamin'io Sochaux. Ity hetsika ity dia nitranga tamin'ny vanim-potoanan'ny 2006 / 2007. Soa soa ho azy, nipoaka i Ivan raha vao nilalao ny lalao voalohany ho an'ny klioba. Tamin'ity lohataona ity, tao amin'ny 2006, nanomboka nanoratra momba ny iray ny gazety frantsay tovolahy marevaka sary etsy ambany izay tia mijery ny vahoaka.
Ny fampisehoana mahatalanjona an'i Ivan dia nitarika ny diany nankany Belzika izay inoany fa hihombo haingana kokoa izy. Nanomboka nampindramin'i Ivan i Roeselare talohan'ny nifindrany tany Club Brugge izay nahatonga ny anarany ho an'ny tenany ihany tamin'ny farany. Miaraka amin'ny klioban'ny belarosy, i Ivan dia lasa mpilalao baolina Belza Pro League ambony ary Belza mpilalao baolina kitra indrindra an'ny taona ho an'ny 2011.
Nahazo alalana izy io Borussia Dortmund izay nahazoany ny 2011-12 Bundesliga. Tamin'izany fotoana izany dia tsy fantatra intsony izy bandy volo volo, fa mpilalao baolina iray matotra sy mahafaty eo amin'ny elatra sy eo anoloana tanjona. Ny diany mankany VfL Wolfsburg sy Inter Milan dia manaraka ny manaraka ary ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara ankehitriny.
Ivan Perisic Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra -Relationship Life
Amin'ny mpilalao baolina kroaty mahomby rehetra, misy sarety mahagaga, sipa sy vady. Ivan Perisic nihaona amam-pitiavana i Josipa tany am-pianarana. Tamin'izany fotoana izany, ireo mpankafy roa ireo dia samy mpiara-mianatra izay niara-nizara ny sekoly ambaratonga iray tao am-pianarana.
Samy nanomboka ny fifandraisana izy ireo ho namana tsara indrindra ary nifampiarahaba. Ivan sy Josipa dia nanambady an'i 2012 nandritra ny fotoana niarahany tamin'i Borussia Dortmund. Mpifaly sambatra izy ireo hatramin'ny nanambadiany.
Samy niara-nanambady an'i Manuela ny roa tonta ary zanakalahy iray, Leonardo izay telo taona noho ny anabaviny. Leonardo Perisic dia teraka tany Wolfsburg ary voalaza fa manana fifamatorana tena mafy miaraka amin'ny rainy izay mino fa ho lasa mpilalao baolina toy ny azy indray androany ny zanany lahy. Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nisy olana ara-bola toy ny niainany tamin'ny fianakaviany.
Ivan Perisic dia manolo-tena tanteraka amin'ny fianakaviany. Tsy tia dokam-barotra be loatra ianao, dia naka sary iray tamin'ny fianakaviany i Ivan indray mandeha teo anoloan'ilay lembalemba tsara tarehin'ny Lake Lugano any Soisa.
Ivan Perisic Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra -Fianakaviana
Ny Monies Ivan Perisic natao tamin'ny baolina dia nahasoa ny fianakaviany. Nikarakara ny reniny sy ny anabaviny izy ary nametraka ny trosan-drainy avy amin'ny fitaovam-pambolena izay nividianany vola mba hitazonana ny fianakaviany ho velona.
Raha nilaza ny loharanom-baovao iray, ny orinasa mpamboly Antie nividy trosa dia tsy voavaly ara-potoana ary nitarika ady ara-dalàna izay nahatonga ny fianakaviana Perisic ho natahotra. Ny fahatahorany ihany nony farany dia nandoa ny trosa rehetra i Ivan.
Ivan Perisic Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra -Tatitra momba ny asa
Ivan Perisic dia lavo niaraka tamin'ny Jurgen Klopp Tao Dortmund noho ny tsy fisian'ny fotoana nilalao. Klopp Ny sary etsy ambany dia notazomina foana tao amin'ny fanomezam-boninahitra Perisic ary nokolokoloiny ho "jaza”Noho ny fihetsiny.Ideally, tsy te hipetraka eny amin'ny dabilio i Ivan Perisic. Rehefa nadinadinina izy dia nilaza hoe:…
"Rehefa mipetraka eo am-baravarankely aho dia maty," Tsy toy ny sazy ho ahy ny tsy filalao lalao. Tsy maintsy nianatra ny fomba hahatonga azy ho matihanina amin'ny fomba sarotra aho. Mila manana saina matotra aho "
Ivan Perisic dia tsy namana ho an'ny mpangalatra Juventus. Rehefa tezitra izy, dia ataony eo amin'ny vozony sy ny valanorano ny mpifanandrina aminy Juan Cuadrado ary Alvaro Morata.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaranay tantanin'ny tantaran'ny tantaram-pianakavian'i Ivan Perisic sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Daty efa namboarina: 29 aprily 2020
Daty efa namboarina: 4 septambra 2020
Adnan Januzaj Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra